Apple iPad Pro: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Wararka Gadget
Kuwani waa iPad Pro 2018 cusub
Eder Esteban | | Apple, Kiniiniga
Shirkadda Apple ayaa magaalada New York ku qabatay munaasabad cusub maanta oo ay taariikhdu tahay 30-ka Oktoobar, taas oo ay ku soo bandhigeen taxane cusub oo taxane ah. Mid ka mid ah badeecooyinka lagu soo bandhigay, oo ay si weyn u rajeynayaan adeegsadayaasha, waa iPad Pro cusub 2018. Sidii looga faallooday toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan wajahaynaa isbeddel muuqda oo ka socda shirkadda Cupertino.
Naqshad cusub ayaa loo soo bandhigay iPad Pro 2018, marka lagu daro ka mid noqoshada taxanaha hagaajinta, heerarka oo dhan. Marka waxaan heleynaa qaabka ugu dhameystiran ee Apple soo bandhigtay illaa iyo hadda. Diyaar ma u tahay inaad wax badan ka ogaato?
Naqshad cusub, oo soo saareysa faallooyin wanaagsan iyo awood aad u weyn ayaa ah labada dhinac ee sida ugu fiican u qeexi kara jiilkan cusub. Jiil isbeddel ah, sida shirkadda lafteeda sheeganeyso. Waana taas Tani waa isbeddelkii ugu weynaa tan iyo markii la soo saaray qaabkii ugu horreeyay saddex sano ka hor.
2 Processor iyo keydinta
3 Qalinka Apple iyo Foomka Keyboard-ka Smart-ka ah
4.1 iPad Pro oo leh shaashad 11-inji ah
4.2 iPad Pro oo leh shaashad 12,9-inji ah
Waxyaabaha ugu cusub ee aan ka helno iPad Pro 2018 waa maqnaanshaha badhanka Guriga iyaga ku jira. Go'aan la raacayo midka Apple ay ku qaadatay moodeladiisa iPhone-ka, markaa maahan wax iska caadi ah. Maqnaanshaha badhan wuxuu u oggolaanayaa meegaarro yaryar, oo u tarjumaya shaashad ballaaran. Maxay shaki la'aan gacan ka geysaneysaa inay ka dhigto ikhtiyaar ku habboon marka ay timaado daawashada taxanaha ama filimada iyaga ku jira.
Laba cabbir ayaa lagu soo saaray jiilkan cusub. Waxaa jira qaab 11-inji ah iyo cabir 12,9-inji ah. Si ay isticmaaleyaashu awoodi doonaan inay doortaan cabirka ay u maleynayaan inuu ugu sahlan yahay iyaga. Farqiga kaliya ee udhaxeeya labadooda waa cabirka, heerka qeexida waa isku mid.
IPad Pro wuxuu arkay looxyadooda oo yaraaday, qaasatan muraayadaha kore iyo hoose kani waa la arki karaa. Laakiin waa xarafyo dhumuc weyn leh awood u yeelan karaan inuu ku xirnaado dareeraha Aqoonsiga Face-ka, mid ka mid ah howlaha xiddigaha ee jiilkan cusub. Waxyaabaha ay suurta gashay iyada oo aan loo baahnayn darajo, in badan oo ka mid ah gargaarka. Waxa kale oo aad arki kartaa in geesaha la soo koobay, markaa qaabka 90 darajo ayaa la tuuray.
Apple waxay sii xaqiijineysaa in dadka isticmaala waxay awoodi doonaan inay ku adeegsadaan IPhone Pro Pro aqoonsi wajiga ah dusha ama toosan. In kasta oo qaabeynta bilowga ah aan ku qaban doonno qaabka sawirka. Markaan tan qabanno, waxaan u isticmaali karnaa labada dhinacba. Maxaa na siin doona xulashooyin dheeri ah oo aan u isticmaalno.
Waxaan wajaheynaa shaashad retina oo dareere ah oo ku jirta barnaamijkan 'iPad Pro'. Apple weli kuma aysan boodin OLED jiilkan, laakiin waxaan ka helnaa sida ugu fiican gudaha LCD ee shaashadan. Waxay u isticmaashaa teknolojiyadda iPhone XR bandhigga, oo ah muuqaalka dareeraha dareeraha ee aan hore u soo sheegnay. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa ProMotion, gamut midab ballaaran iyo tikniyoolajiyada TrueTone oo ku dhex jira.
Processor iyo keydinta
Naqshad cusub iyo processor cusub. Maaddaama Apple ay soo bandhigeyso A12X Bionic iyaga ku jira, oo ah nooc ka mid ah processor-ka la soo bandhigay bil ka hor jiilkiisa cusub ee iPhone. Waa processor kaas oo soo bandhigi doona horumarro kala duwan, oo aan ku koobnayn oo keliya waxqabadka iyo awoodda. Waxa kale oo jira hagaajinta sawirada.
Waxay ku saleysan tahay nidaamka iPhone 7nm. Processor-keedu wuxuu leeyahay wadar ahaan siddeed koronto, halka GPU, oo ay naqshadeeyeen shirkadda Apple laftiisu, uu leeyahay 7 koronto. Halkaas ayaan ka helaynaa 10.000 milyan oo transistors. Mashiinka neerfaha sidoo kale wuxuu noqdaa mid muhiim ah, maadaama shirkadda Cupertino ay soo bandhigtay kii aan ku aragnay iPhone-ka sanadkan.
Waa Naqshad Neural ah oo u oggolaan doonta 5 tiriliyan hawlgal in lagu fuliyo, oo lagu heli karo Barashada Mashiinka. Muuqaal kale oo lagu hagaajiyay iPad Pro-kan cusub ee shirkadda Mareykanka laga leeyahay. Sida keydinta, hadda waxaan dooneynaa inaan helno ilaa 1TB oo kaydinta flash-xawaare sare leh.
Shaki la'aan, mid ka mid ah isbeddelada ugu xiisaha badan waa soo bandhigida USB Type-C-ka iPad Pro-kan. Waxaa jiray warar xan ah toddobaadyadan in Apple ay ku soo bandhigeyso jiilkan cusub, sidaas darteedna uu yahay kii ugu horreeyay. Ugu dambayntiina durba way dhacday. Marka shirkaddu hadda waxay meel iska dhigaysaa hillaac. Intaa waxaa dheer, iPhone waxaa lagu soo oogi karaa iyadoo la adeegsanayo USB-C illaa hillaaca hillaaca oo lagu xirayo shaashad dibadeed illaa 5K.
Qalinka Apple iyo Foomka Keyboard-ka Smart-ka ah
Kaliya maahan iPad Pro in la cusbooneysiiyay, sidoo kale qalabkiisa ayaa sameeyay. Sida aaladda ugu weyn, waxaan ku helnaa isbeddelo xagga naqshadeynta iyo heerka shaqooyinka ku jira qalinka Apple iyo Smart Keyboard. Waa laba qalab oo la socday qoyskan aaladaha muddo dheer, markaa cusboonaysiinta ayaa muhiim ahayd.
Ugu horreyntii waxaan helnaa Faylka Keyboard-ka Smart-ka ah. Apple waxay qaadatay go'aanka ah inay kumbuyuutarka ku shubto iPad Pro iyadoo la adeegsanayo Smart Connector-ka, taas oo ay ugu wacan tahay suurtagalnimada in la isticmaalo kumbuyuutarka adoon isticmaalin Bluetooth ama batari isku dhafan. Tani waa wax noo oggolaan doonta inaan iska ilowno culeyskaaga.
Sidii aan kuu sheegnay, sidoo kale waxaa jiray isbeddel ku yimid qaabkiisa. Kiiskan, Apple wuxuu soo bandhigayaa qaabka kumbuyuutarka caato ah. Intaa waxaa sii dheer, waxaan helnaa laba boos oo janjeera shaashadda. Sidan oo kale, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ugu adeegsanno miiska ama miiska, laakiin booska kale waxaa loogu isticmaali karaa dhabta, haddii aan u adeegsanno ku fadhiista fadhiga sariirta ama sariirta.
Qalabka labaad ee iPad Pro waa qalinka Apple. Shirkadda Cupertino waxay sameysay naqshad isku mid ah, soo bandhigida magnet-ka dhexdeeda, si markaas ay awood ugu yeelan karto inay kiniinka u ekaato, sida aad ku arki karto sawirka. Markaan sidan yeelno, stylus wuxuu si lacag la'aan ah ugu soo dallacayaa. Marka way fududahay hadda in la raro. Qaabka cusub wuxuu kaloo leeyahay aag cusub oo taabasho leh, kaas oo aan u isticmaali doonno inaan ku qaadno ficillada labaad.
Sida caadiga ah, iPad Pro-kan waxaa lagu sii daayaa noocyo kala duwan, taas oo ku kala duwan kuna xiran kaydinta gudaha, iyo sidoo kale haddii aad rabto nooc leh WiFi ama mid leh WiFi LTE. Iyada oo ku saleysan tan, waxaan helnaa qiimo aad u ballaadhan. Waxaan ku tuseynaa qiimaha dhammaan noocyada jiilka cusub ay ku yeelan doonaan Spain, labadooda cabbir:
iPad Pro oo leh shaashad 11-inji ah
64 GB oo leh WiFi - LTE: 1.049 euro
256 GB oo leh WiFi - LTE: 1.219 euro
512 GB oo wata WiFi- LTE: 1.439 euro
1 TB oo leh WiFi- LTE: 1.879 euro
iPad Pro oo leh shaashad 12,9-inji ah
64 GB oo leh WiFi - LTE: 1.269 euro
256 GB oo leh WiFi - LTE: 1.439 euro
512 GB oo wata WiFi- LTE: 1.659 euro
1 TB oo leh WiFi- LTE: 2.099 euro
Apple ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday qiimaha qalabka. Qiimaha kumbuyuutarka oo ah 199 euro oo ah nooca 11-inji ah iyo 219 euro oo ah cabbirka 12,9-inji. Qiimaha qalinka cusub ee Apple waa 135 euro.
Dhammaan noocyada iPad Pro waxaa hadda si rasmi ah loogu xajin karaa websaydhka Apple. Daahfurka labada nooc ayaa dhici doona Nofeembar 7 adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Apple » Kuwani waa iPad Pro 2018 cusub
eSIM: Wax kastoo aad u baahan tahay inaad ka ogaato